Francesco Totti oo tilmaamay xiddiga uu taageeri doono finalka Champions League – Gool FM
(Yurub) 16 Maajo 2019. Halyeeyga kubadda cagta dalka Talyaaniga iyo kooxda Roma ee Francesco Totti ayaa difaacay xiddigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, kaddib markii ay isaga hareen tartanka Champions League xili ciyaareedkan.
Francesco Totti ayaa wareysi uu bixiyay dhawaantan wuxuu kaga hadlay dhowr arimood ee quseeya kubadda cagta, waxaana ugu horeyn u si weyn u difaacay xidigaha Ronaldo iyo Messi wuxuuna yiri:
“Ronaldo hoos u dhac kuma imaanin, sababtoo ah ku guuleysiga Champions League way adag tahay, laguma xaqiijin karo saxiixa ciyaaryahanka ugu fiican aduunka inaad ugu dambeyntii ku guuleysato tartankan, sidoo kale waxay arintan quseysaa xidiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi”.
“Messi iyo Ronaldo waa kuwo qaas ah, waxay u dagaalamaan xili kasta sida ay ku jibin lahaayeen rikooro, lakiin isbar-bardhiga u dhaxeeya iyaga, Pele iyo Maradona ma ahan wax macquul ah, sababtoo ah kubadda cagta ayaa isbadasha jiilba jiilka ka dambeeya”.
Intaas kaddib Francesco Totti ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya Maxamed Saalah xiligii uu xirnaa maaliyada kooxda Roma iyo haatan uu xiran yahay tan Liverpool wuxuuna yiri:
“Wuxuu bedelay maaliyadaha kooxda oo kaliya, waa ciyaaryahan caalami ah, waa mid ka mid ah xidigaha ugu fiican ee booskiisa, inuu ku biiro Reds waxay gacan weyn ka geesatay inuu horumar sameeyo”.
“Haa, waxaan u maleynayaa in Liverpool ay ku guuleysan doonto tartanka Champions League xili ciyaareedkan, sababtoo ah waxaa qeyb ka ah xidigaha Saalax iyo Alisson Becker, sidaasi darteed waan ku farxi doonaa hadii ay ku guuleystaan koobka tartankan”.